Kedu ihe bụ ecotone na ihe bụ njirimara ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị gụrụ ma ọ bụ nụ okwu ahụ ecotone Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na anyị na-emegharị echiche ahụ ma ọ bụ na ihe metụtara usoro okike. O bu okwu n’adighi eji ya edebe ihe, ya mere, adighi ama ihe putara. Ihe omuma bu ihe ozo bu ihe ngbanwe nke okike n'etiti uzo di iche iche di iche iche.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe njirimara nke ecotone bụ na otu esi akpụ ha.
1 Kedu ihe bụ ecotone
2 Kedu ihe kpatara ecotone
3 Dị Ecotone
3.1 Tundra na taiga na boreal ọhịa
3.2 Ala Wetland
Ihe ndi ozo bu mpaghara okike nke di n’etiti ihe ndi ozo di iche iche. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịchọta mpaghara mgbanwe n'etiti oke ọhịa na ndagwurugwu. Oké ọhịa adịghị agwụ n'otu ebe ma ọ bụ, ma ọ na-ebelata njupụta ya nke nta nke nta. Oke obibi obibi nke dị n’etiti gburugburu ebe obibi ga-eru ọtụtụ narị mita ma ọ bụ ọbụna kilomita. Usoro nwere ike ịbụ:
Ihe mmiri ozuzo. A biome bụ mpaghara ala nke usoro ihu igwe na nke ala na-akọwapụta ahịhịa na anụmanụ ndị anyị hụrụ na ya.
Okirikiri ala.Mgbe anyị nyochara odida obodo anyị nwere ike ịhụ na njedebe nke ụdị okike ebughi ụzọ kọwaa nke ọma mana na, ebe ọ bụ oghere eke, ọ nwere usoro mgbanwe ya n'etiti otu mpaghara gafere na nke ọzọ amalite.
Ihe ndi ozo.Ihe ndi ozo bu uzo otutu umu ndi mmadu na-ebikọkorita na onwe ha na ihe ndi ozo.
Obodo ma ọ bụ ndị bi na ya. Na nke a, anyị na-ekwu maka ụdị osisi na ụdị osisi. Ha bụ ụdị nke kachasị na-anọchi anya mpaghara mgbanwe n'etiti usoro dị iche iche.
Kedu ihe kpatara ecotone
A na-etolite mpaghara mgbanwe ndị a n'ihi omume nke mgbanwe dị iche iche nke anụ ahụ na gburugburu. Otu n'ime njirimara nke kacha emetụta bụ ihu igwe, ọdịdị ala, ngwakọta na nhazi nke ala ma ọ bụ ọnụnọ nke ụdị mmadụ dị iche iche, ma ha bụ anụmanụ ma ọ bụ ihe ọkụkụ, nke a na-akpọ biotope.
Dabere na mgbanwe ndị a na ụkpụrụ ha, mgbanwe ahụ nwere ike ịdị na mberede ma ọ bụ karịa nwayọ. Dịka ọmụmaatụ, ịdị adị nke osimiri nwere ike ịbụ njedebe nke otu usoro na mmalite nke ọzọ na mberede. Otú ọ dị, ịdị adị nke ugwu na ebe kpọda akpọrọ nke ukwuu, pụrụ ime ka njedebe nke oké ọhịa jiri nwayọọ nwayọọ na-agbanwe.
Okwesiri ighota na mpaghara uzo a nwere oke ndu ndu. Nke a pụtara na enwere mmekọrịta n'etiti ụdị dị n'akụkụ ebe dị nso. Anyị na-enwetakwa akụ na ụba ndụ dị ukwuu. Dika mmekorita di uku di n'etiti ndi di iche iche di iche iche, ngbanwe karia nke obula gha adi na ebe obula. Ihe omuma a bu ihe amara dika onu ogugu.
Speciesdị ọ bụla ma ọ bụ obodo nke ụdị ọ bụla na-eme ihe n'ụzọ ụfọdụ dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị na ecotone. Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ ndị a nwere ike ịbụ n'ihi ụdị pH nke ala, nkezi okpomọkụ, ihe ahụ mere na radieshon, ọchịchị ikuku ma ọ bụ oke mmiri dị, n'etiti ndị ọzọ. N'iburu n'uche ụkpụrụ nke mgbanwe ndị a na mmekọrịta dị n'etiti ndị dị ndụ, anyị nwere ike ịhụ na ụdị ọ bụla ga-arụ ọrụ kpọmkwem n'ime ecotone. A na-akpọ nke a ebe obibi obibi. Anyị nwere ike ịchọta ebe obibi ebe ọrụ nke ihe ọ bụla dị ndụ nwere ike ịbụ ndị na-ahazi, mebie ọrụ, ndị njem, ma ọ bụ ndị na-ebugharị, n'etiti ndị ọzọ.
Dịka anyị kwurula na mbụ, e nwere ụdị ecotone dị iche iche dabere na ụdị okike dị n'etiti mpaghara mgbanwe. Enwere ike kewaa ma ọ bụ kewaa mpaghara ndị a n'ụzọ dị iche iche.
1º Ọ bụrụ na anyị na-ezo aka n'ụdị biome, a ga-ekpebi ecotones site na ọnọdụ ihu igwe dịka mmiri, okpomoku na onodu ihe.
2nd Ọ bụrụ na anyị na-ezo aka n'ụdị odida obodo, a ga-eji ecotones mara ya ofdị ihu igwe, ọdịdị ala na ụfọdụ njirimara kemịkal nke ala nwekwara ike ịgụnye.
3rd ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ecotones nke ndị bi na ya ma ọ bụ obodo, anyị ga-ekwu maka ya mmetụta nke mmekọrịta n'etiti ụdị na mmetụta ha na nhazi na nkesa ha.
Anyị ga-etinye ụfọdụ ihe atụ nke ecotones na njirimara ha:
Tundra na taiga na boreal ọhịa
Ọ bụrụ na anyị gaa America na Europe anyị nwere ike ịhụ na enwere ókèala n'etiti tundra na boreal ọhịa. Nke a bụ ihe atụ nke ekotone n'etiti abụọ dị iche iche na bioms nke nwere ọnọdụ dị iche n'etiti ibe ha. Na tundra anyị na-ahụ polar ebe nwere okpomọkụ na-agaghị agafe ogo iri na nkezi. Mmiri mmiri ozuzo na-abụkarị 250mm kwa afọ. Otu n'ime ihe e ji mara ebe a bụ permafrost. Ọ bụ ala nke na-adịgide oyi n'oge niile n'afọ.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere oke ọhịa boreal nke dị na ndịda nke tundras. N'ime usoro ihe omumu a, ọnọdụ okpomọkụ dị site na ogo 30 n'okpuru zero na ogo 19. Mmiri mmiri ozuzo ya dị n'agbata 400 na 450mm na nkezi kwa afọ. Ya mere, ecotone nke di n’etiti ihe abuo a adighi oke. Agbanyeghị, na Europe anyị nwere ike ịchọta ecotone ruo kilomita 200 n'ogologo. Ihe ejiri mara ya bu uzo nkewaputara nke nwere otutu oke ohia na ndi ozo ndi ozo na ndi ozo.
Ọ bụ ụdị ecotone ọzọ nke na-aga n'etiti mbara igwe na mmiri. Mpaghara mgbanwe a na-arụ ọrụ dị mkpa na idebe gburugburu ebe obibi, ya mere nchekwa ya dị oke mkpa. Mpaghara a na-enyere aka melite ogo mmiri site na ịdebe ihe mkpofu, ịmịkọrọ ihe na-edozi ahụ, na ịhapụ kemịkal. Ihe omimi ndia nwere ike ibu:
Oasis na mbara ọzara.
Ohia-páramo-ahihia ndu di ala n’ogo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mkpa ichekwa mpaghara mpaghara ndị a niile n'ihi na ha nwere nnukwu ihe gbasara ndụ. Ha bụ mgbanwe nke ụdị ndụ dị iche iche na mbara ụwa na-anaghị akwụsị inye onyinye ha maka mmepe nke ihe ndị dị ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ ecotone